सजिलो पम्पकिन सूप (क्यान्ड वा ताजा कद्दूको साथ) - व्यंजनहरु
के कुखुरा shawarma संग सेवा गर्ने
कसरी घर मा झिंगे लो mein बनाउने
भ्यानिला पुडिंग बन्ड्ट केक स्क्र्याचबाट
कसरी कपडा सफ्टनरको साथ फेब्रिज बनाउने
सजिलो पम्पकिन सूप
पम्पकिन सूप धेरै स्वादको साथ क्रीमी फल सूप हो र क्यान्ड कद्दूको प्रयोगले यो नुस्खालाई हावा बनाउँदछ। यो धनी सूप कद्दू, न्यानो मसलाको भरिएको छ, र चिल्लो र बेकनको साथ माथि सम्म शुद्ध।
केहि संग यो सेवा ताजा डिनर रोल कचौरामा बाँकी रहेका प्रत्येक खण्डहरू माथि भुल्न!
कसरी पिच पाई बनाउने फ्रन्च पिचहरूसँग
एक गिरावट मनपर्ने
गिरावट हाम्रो लागि सबै चीज कद्दूले भरिएको छ। भुटेको कद्दू , बनाउँदै फर्सीको बिउ , र पक्कै नक्काशी गरिएको ज्याक-ओ-लालटेन (उल्लेख नगर्नु क्लासिक घर बनाएको कद्दू पाई )।
यो कद्दू सूप विधि आराम र उत्सव बीच उत्तम सन्तुलन हो!
क्यान्ड वा प्रयोग गर्नुहोस् घरमा बनाइएको कद्दू प्यूरी यो नुस्खा द्रुत बनाउन।
यो नुस्खा बहुमुखी छ, मसलादार कुम्परको सूप बनाउन केहि चिली फ्लेक्समा थप्नुहोस्, वा नारियलको दूधको लागि क्रीमको विकल्प पनि लिनुहोस्। अन्तहीन संभावनाहरू।
पम्पकिन सूप कसरी बनाउने
धुम्रपान र नुनिलो, बेकन एकदम राम्रो सन्तुलित स्वाद सिर्जना गर्न कद्दू को मिठास संग महान छ! निश्चित गर्नुहोस् कि बेकन पर्याप्त क्रिस्प छ कि तपाईं यसलाई चुराउन सक्नुहुन्छ, र प्याज पकाउन फ्याट रिजर्भ गर्नुहोस्।
सेतो चकलेट कर्ल कसरी बनाउने
फ्राउन बेकन र अलग सेट। प्यालेको बेकन चराहरू मा पकाउनुहोस्।
शोरबा जोड्नुहोस् र मसाला र स्वाद मिश्रण गर्न सिमर।
कद्दू र क्रीम मा चलाउनुहोस् र उमालेको ।
शुद्ध सूप एक संग चिकनी सम्म हात ब्लेंडर ।
ब्लेंडर टिप: यदि तपाईंसँग ह्यान्ड ब्लेन्डर छैन भने, नियमित ब्लेन्डरमा प्युरी। निश्चित गर्नुहोस् ब्लेन्डरलाई कडा रूपमा मोहर नगर्नुहोस् किनकि स्टीम उम्कने आवश्यकता पर्दछ। भाँडोमा फर्काउनु भन्दा पहिले सूपलाई राम्रो बनाउनको लागि केही पल्स गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ दुध प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तातो सूपले सम्भाव्य रूपमा यसलाई घुमाउन सक्छ। भारी क्रीम, कद्दूको सूपमा प्रयोग गर्न सजिलो दुग्ध हो किनकि उच्च-फ्याट सामग्रीले सजीलो छुट्याउन यसलाई जोगाउँदछ!
स्क्वाश सूपको साथ के सेवा गर्ने
यस रंगीन कद्दू सूप नुस्खा सेवा गर्न को कटोरा मा खन्याउनु र सजावट को साथ रचनात्मक को रूप मा सजिलो छ।
एक सुन्दर लहर प्रभाव सिर्जना गर्न क्रीम को एक स्प्ल्याश मा चलाउनुहोस्, एक राम्रो crunch को लागि केहि crumbled बेकन, अजमोद, र croutons जोड्नुहोस्!
किनभने यो सूप धनी छ, म सामान्यतया यसलाई रोटी वा रोटीको साथ सेवा गर्दछु सजिलो घरेलु छाछ बिस्कुट , एक द्रुत सलाद पनि राम्रो काम गर्दछ।
अधिक पम्पकिन रेसिपीहरू तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
पम्पकिन कपकेक्स - तँ शान्त र ओसिलो!
पम्पकिन डम्प केक (Ing सामग्री) - द्रुत प्रेप!
पद्दो दालचिनी रोल - उत्तम सप्ताहन्त ब्रेकफास्ट!
पाई कद्दू चीजको रूपमा सजिलो
पम्पकिन चकलेट चिप कुकीज - Lunchbox मनपर्ने!
के तपाईंको परिवारले यो कद्दू सूप नुस्खा मनपरायो? एक टिप्पणी र रेटिंग तल निश्चित छोड्नुहोस्!
पेनी बेकन कर्न चाउडरको साथ खर्च गर्नुहोस्
तयारी समयबीस मिनेट कुक समय० मिनेट कुल समयपचास मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन क्रीमी चिकन बेस बेकन, कद्दू, मसलाको साथ लोड गरिएको छ, र मिठो नभएसम्म शुद्ध हुन्छ। यो सजिलो स्क्वाश सूप यसको रूपले फेस्टिभ हुन्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। स्लाइसहरू बेकन काटिएको
▢१-२ चम्मच मक्खन वैकल्पिक
▢१ मध्यम प्याज राम्रो पाकेको
▢½ कप गाजर काटिएको
▢१ ल्वाल लसुन कीमा
▢१ चम्मच ब्राउन सुगर
▢२ ½ कप कुखुराको ब्रोथ
▢दुई स्प्रिगहरू ताजा थाइम वा as चम्मच सुक्खा थाइम
▢⅛ चम्मच खुर्सानी
▢⅛ चम्मच जायफल
▢पन्ध्र औन्स कद्दू प्यूरी
▢½ कप भारी क्रीम गार्निशको लागि अतिरिक्त
▢दुई चम्मच अजमोद काटिएको र विभाजित
▢½ कप croutons वैकल्पिक गार्निश
एउटा स्किलेटमा, बेकनलाई थोरै कुरकुरा नभएसम्म पकाउनुहोस्। स्किलेटबाट बेकन हटाउनुहोस् तर ग्रीस राख्नुहोस्। बेकनबाट कति फ्याट रेन्डर गर्दछ यसमा निर्भर गर्दछ, तपाईले दुई बटाटो ठूलो चम्चा बनाउन बटरको अलि थप्न आवश्यक पर्दछ।
स्किलेटमा प्याज थप्नुहोस् र नरम पकाउनुहोस्। एक पटक अस्पष्ट भयो भने, गाजर र लसुन मा चलाउनुहोस्। केही मिनेट को लागी खाना बनाउनुहोस्, त्यसपछि खैरो चिनीमा हलचल गर्नुहोस्।
कुखुराको ब्रोथ, बे पत्ती, थाइम स्प्रिगहरू, नुन, मरिच र जायफल जोड्नुहोस्। एक फोडामा ल्याउनुहोस् तब कम गर्मीमा कम गर्नुहोस् र १ minutes मिनेटको लागि उकालो।
कद्दू र क्रीम थप्नुहोस् र माध्यम बाट गर्मी। तेज पात खारेज गर्नुहोस् र ह्यान्ड ब्लेन्डर प्रयोग गरेर, चिल्लो नभएसम्म प्युरी।
१ चम्मच अजमोद मा चलाउनुहोस् र सूप कचौरा मा खन्याउनुहोस्। क्रीम, croutons र crumbled बेकन र बाँकी पार्सली संग गार्निश।
ताजा कद्दू प्रयोग गर्न, आधा मा सानो चिनी कद्दू काट्नुहोस् र बीउ हटाउनुहोस्। जैतुनको तेलले ब्रश गर्नुहोस् र निविदासम्म 350 350० ° एफ मा-35-40० मिनेट बेक गर्नुहोस्। फूड प्रोसेसरमा मासु र प्यूरी निकाल्नुहोस्। यदि तपाईंसँग ह्यान्ड ब्लेन्डर छैन भने, नियमित ब्लेन्डरमा समाप्त सूप प्यूरी गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् ब्लेन्डरलाई कडा रूपमा मोहर नगर्नुहोस् किनकि स्टीम उम्कने आवश्यकता पर्दछ। दुध सम्भावित तातो सूपमा घुमाउन सक्छ। भारी क्रीम (वा नरिवलको दूध) पनि यो नुस्खामा प्रयोग गर्न सजिलो दुग्ध हो किनभने उच्च-फ्याट सामग्रीले सजीलो रूपमा विभाजित गर्नबाट जोगाउँछ!
क्यालोरिज:2०२,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:6g,मोटो:२g,पागलिएको बोसो:एघारg,कोलेस्ट्रॉल:२मिलीग्राम,सोडियम:१०5555मिलीग्राम,पोटासियम:4०4मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:6g,भिटामिन ए:19935IU,भिटामिन सी:२१..5मिलीग्राम,क्यालसियम:। 73मिलीग्राम,फलाम:२.3मिलीग्राम
कीवर्डसबै भन्दा राम्रो कद्दू सूप नुस्खा, कसरी कद्दू सूप, कद्दू सूप, कद्दू सूप नुस्खा बनाउन कोर्ससूप पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।